China soybean peptide ụlọ ọrụ na ndị na-eweta ngwaahịa | Huayan
Peyide soybean bụ peptide na-arụ ọrụ na obere molecule, a na-ewepụta ya site na protein soy inọrọ iche site na usoro enzymatic hydrolysis. Mkpụrụ protein ahụ karịrị 90% ma nwee ụdị amino acid 8 nke bara uru maka mmadụ, ọ bụ ezigbo akụrụngwa maka nri na ngwaahịa nlekọta ahụike.
Isi mmalite: protein na-abụghị gmo soy protein
Peyide peyide bụ obere molecule protein nke ahụ mmadụ na-adị mfe ọfụma ma dabara adaba maka mmadụ niile nwere mgbaze protein na amịkọrọ nri, dị ka ndị toro eto na ndị agadi, ndị ọrịa na-agbake ọrụ, tumor, radiotherapy, chemotherapy patients, eriri afọ na-arụ ọrụ. Na mgbakwunye, soy peptide nwekwara nsonaazụ nke imeziwanye ọgụ, ime ka ike nke anụ ahụ dị, ike ọgwụgwụ na ibu ibu. Ke adianade do, soy peptide nwere ezigbo nhazi Njirimara dị ka enweghị protein denaturation, okpomọkụ na-abụghị coagulation, mmiri solubility, ezi fluidity, wdg Ọ bụ ihe magburu onwe ike nri mgwa ihe.
1.Anti-ịka nká, Anti-ike ọgwụgwụ na ike akwara;
2.Lower cholesterol dị elu ma belata ọbara mgbali;
A na-eji ngwaahịa ndị a eme ihe n'ọtụtụ ebe na nri, ịchọ mma na ọgwụ.
2.Excellent technology usoro
3.Provide oge zuru ezu mgbe-ahịa ọrụ.
Nke gara aga: Okpokoro kukumba Peptide
Osote: Ukpa Peptide